Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah si ay u Iibiyaan Kaaliyaha Takhasuska Takhasuska ah | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaWasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah Iibsiga Kaaliyaha Khabiirka
27 / 12 / 2019 Shaqooyinka, GUUD
Waxa laga keenay Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga:
DIIWAAN GALINTA IYO TABU KHUDBADAHA KAADHKA KAADHKA
LAMBARKA Tijaabada Imtixaanaadka I - Macluumaadka ku saabsan Imtixaanaadka
- Si loogu meeleeyo xarunta dhexe ee Wasaaraddayada (ANKARA);
Isugeyn 8 Kaaliyeyaal Ku takhasusay Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah oo laga soo bilaabo 9aad iyo 30aad ayaa laga shaqaaleysiin doonaa.
- Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah waxay leedahay awood ay ku go'aamiso oo ay isbedello ku sameyso inta u dhexeysa laamaha iyo laamaha iyadoo loo eegayo xaaladda baahiyaha, haddii aysan jirin codsiyo badan sida tirada khubarada kuxigeenka loo oggolaanayo imtixaanka gelitaanka.
- Haddii ay dhacdo in codsadayaasha soo buuxiya shuruudaha imtixaanka oo si adag u codsanaya imtixaanka ay ka badan yihiin tirada musharraxiinta ku xusan miiska, tirada musharraxiinta ee aan kor ku soo xusnay waxaa loo geyn doonaa imtixaanka gelitaanka laga bilaabo murashaxa leh dhibcaha ugu sareeya ee KPSS. Haddii tirada murashaxiinta safka ugu dambeeya ay ka badan yihiin mid sababtoo ah waxay heleen dhibco isku mid ah, dhammaan musharixiintaan waxaa loogu yeeri doonaa imtixaanka.
II- SHURUUDAHA CODSASHADA
- Imtixaanka Xulashada Shaqada Dadweynaha ee lagu qabtay sanadka 2018 ama 2019 ee OSYM loogu talagalay (A) xujooyinka kooxda, si ay uga heleen 75 dhibcood ama in ka badan dhibcaha ku xusan miiska,
- Inaad ka qalinjabiso waaxaha ku xusan miiska ama u dhigma kulliyadahan oo ay ugu yaraan 4 sano waxbarasho leeyihiin mid ka mid ah kulliyadaha 4-ta sano ah ee ay aqbashay Golaha Tacliinta Sare illaa waqtiga kama dambeysta ah ee dalabka,
- Inaad yeelato shuruudaha guud ee ku xusan cutubka (A) ee sadarka ugu horreeya ee Qodobka 657aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee lambarka 48,
- In aaney gaarin da'da 01 sano illaa 01/2020/35 (kuwa ku dhashay wixii ka dambeeyay 1-da Janaayo 1985),
- Inaanu helin adeeg militari oo loogu talagalay ragga murashaxiinta ah,
- Inaanu lahayn cudur maskaxeed oo ka horjoogsan kara inuu si joogto ah u guto waajibaadkiisa,
- Codso waqtiga kama dambaysta ah.
III- DIIWAAN GALINTA
Codsiyada waxay bilaabmi doonaan 20/01/2020 waxayna ku dhamaan doonaan 31:01 2020/16.00/XNUMX.
a) Foom dalabka, oo laga heli karo websaydhka “www.enerji.gov.tr ​​ın ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga,
b) Daabacaadda kombiyuutarka ee dokumentiga natiijada KPSS,
c) Nuqulka asalka ah ama la ansixiyay ee shahaadada qalinjabinta (Haddii arjiga lagu sameeyay shakhsi ahaan nuqulka asalka ah, nuqulkii asalka ahaa waxaa ansaxin doona Wasaaradda.) ama shahaadada qalinjabinta in lagala wareego e-dowladda.
d) Nuqulka manhajka musharaxa (waxaa lagu habeyn karaa qoraalkiisa ama kumbuyuutarka iyadoo la raacayo tusaalaha laga heli karo barta internetka ee ah www.enerji.gov.tr ​​Bakanlığı ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah.)
Adiguna shakhsi ahaan ama warqad ahaan waxaad ugu dirtaa MENR Agaasinka Guud ee Adeegyada Maareynta Nasuh Akar Neighborhood Türk Ocağı Caddesi No: 2 Bahçelievler / Çankaya / ANKARA.
- Dib u dhacyada ku yimaadda boostada iyo codsiyada aan lagu sameyn waqtiga lagu cayimay ogeysiiska iyo foomamka dalabka ee wata dukumiintiyada maqan ama aan la saxiixin lama tixgelin doono.
TAARIIKHDA IV - BAARISTA TAARIIKHDA iyo Goobta
- Imtixaanka gelitaanka waxaa la qaban doonaa inta u dhexeysa 24ka Febraayo - 06 Maarso 2020 xarunta guud ee Maareynta Maareynta Adeegyada ee dabaqa 2-aad ee xarunteenna Wasaaradda oo ku taal Nasuh Akar Neighborhood Türk Ocağı Caddesi No: 1 Bahçelievler / Çankaya / ANKARA.
- Liiska musharixiinta u qalma inay galaan imtixaanka gelitaanka iyo jadwalka taariikhda imtixaanka waxaa lagu daabici doonaa websaydhka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah “www.enerji.gov.tr”.
V - MAGACA EXAM - MAWDUUC IYO QIIMAYN
- Imtixaanka gelitaanka ayaa af ahaan lagu qaban doonaa.
- Murashaxiinta imtixaanka afka ah;
a) Heerarka aqoonta ee laxiriira arrimaha xirfadleyda, Sharciga Suuqa Korontada Korantada No. 6446, Sharciga Suuqa Gaaska dabiiciga No. 4646 (Wax ka badalida Sharciga Suuqa Korontada iyo Sharciga ku saabsan Suuqa Gaaska Dabiiciga), Sharciga Saliidda Saliidda Batroolka No. 5015, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Law No. 5307 Sharciga Wax ka badalida Sharciga Suuqa Korontada iyo sharciyo kale oo sare oo laxiriira kuwan,
b) Inay fahmaan oo ay soo koobaan mowduuc, karti ay u muujiyaan iyo awoodda sababaynta,
c) Karti, karti wakiilnimo, ku habboonaanta habdhaqanka iyo falcelinta xirfadda ç) Is-kalsooni, karti iyo qancin,
d) Awoodda guud iyo dhaqanka guud,
e) U-furnaanshaha sayniska, teknolojiyadda iyo horumarka hadda jira waxaa lagu gaari doonaa iyadoo la qiimeynayo kontonka qodob ee far-hoosaadka (a) iyo toban qodob mid kasta oo ka mid ah astaamaha lagu xusay cutub-hoosaadka (b) illaa (e), iyo bixinta qodobo gaar ah.
Si loogu guuleysto imtixaanka afka, celceliska xisaabinta buundooyinka ee uu siiyay gudoomiyaha iyo xubnaha guddiga in ka badan boqol dhibcood waa inay ahaadaan ugu yaraan toddobaatan.
VI - LAGU AQOONSANAYO SAMEEYAASHA JOOJI
- Gudiga imtixaanku wuxuu ka dhigayaa darajada ugu dambeysa guusha si gooni gooni ah iyadoo la raacayo aagaga qalin jabinta ee kootada lagu dhawaaqay.
- Laga bilaabo musharaxa oo leh natiijada ugu sarreysa, murashaxa sharafta leh waxaa lagu go'aamiyaa tirada shaqaalaha ee lagu cayimay ogeysiiska. Liiska kaydka ayaa la go'aamiyay haddii aanu ka badnayn kala badhka tirada kaaliyaha shaqaalaha la shaqaaleysiin doono.
- Haddii aysan jirin tirada musharraxiinta guuleysta ee lagu cadeeyay qoondada lagu dhawaaqay dhamaadka imtixaanka, tirada musharraxiinta guuleysta waa la aqbali karaa ama tirada kootada ee kulliyadaha ama waaxaha kor ku xusan waa la beddeli karaa.
- Xuquuqda musharraxiinta ku jira liiska keydka ayaa la isticmaali karaa illaa taariikhda imtixaanka soosocda (labadii sano ee ugu dambeysay) umana yeelatid xaq u yeelasho ama mudnaansho baaritaanada xigta.
- Ku helida dhibco ah 70 ama wixii ka sareeya imtixaanka gelitaanka ma ahan mid xaq u leh murashaxiinta aan u qalmin liiska koowaad iyo badalka.
- Magacyada iyo magacyada musharixiinta ku guuleystey imtixaanka gelitaanka iyo liistada iyo liiska keydka nambarada musharraxiinta waxay ku qoran yihiin sabuuradda dhismaha xarunta dhexe ee Wasaaradda iyohttp://www.enerji.gov.tr&#8221; waxaa lagu shaacin doonaa cinwaanka internetka.
VII - ISSUES KALE
Kuwa aan dalban xitaa haddii aysan haysan cudurdaar ansax ah waqtiga loo soo sheego iyo kuwa aan buuxin shuruudaha looga baahan yahay looma magacaabi doono. Murashaxiinta aan codsan ballan la'aan cudurdaar la'aan mudada la ogeysiiyay ama aan bilaabin shaqeynta waqtiga loo magacaabay looma tixgelin doono inay u qalmaan.
- Kuwa aan ku dalban mudada lagu cayimay ogeysiiska in loo gudbiyo, kuwaa ka faaiidaysta meelaynta, kuwa balanta laga joojiyay iyo in aysan fulin wax ka mid ah shuruudaha gelitaanka shaqaalaha rayidka waxaa laga soo magacaabayaa liiska keydka.
- Imtixaannada kuwa codsiyadooda la aqbalo iyo kuwa magacyadooda lagu helo sheegashooyinka beenta ah waxaa loo qaddariyo inay yihiin wax-kama-jiraan oo ballantooda lama sameeyo. Waa la tirtirayaa xitaa haddii loo xilsaaray. Iyagu ma sheegan karaan wax xuquuq ah isla markaana dacwad fal-dambiyeed ayaa loo xareeyay Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud si loogu dabaqo qodobbada la xiriira ee Xeerka Ciqaabta Turkiga ee lambarka 26 ee ku taariikhaysan 9/2004/5237. Sidan, haddii Wasaaraddu marin-habaabiso sarkaal dowladeed, xaaladdooda waxaa la ogeysiiyaa hay'addaha ay ka shaqeeyaan.
- Musharixiinta waxaa looga baahan yahay inay wataan midkastoo dukumiintiyadooda aqoonsiga ah (kaarka aqoonsiga, laysanka darawalnimada ama baasaboor) markay qaadanayaan imtixaanka.
- Musharixiintu waa in ay u soo gudbiyaan diidmadooda natiijada imtixaanka Wasaaradda “http://www.enerji.gov.tr&#8221; Waxay ka dhigi doonaan MENR gudaheeda 5 (shan) maalmood gudahood shaqo kadib markii lagu shaaciyay cinwaanka internetka.
- Codsiga ama diidmada la sameeyay ka dib marka uu dhacayo lambarka Aqoonsiga Jamhuuriga Turkiga, magaca, magaca, magaca iyo cinwaanka lama tixgelin doono.
IX- WARBIXINTA MACLUUMAADKA
Macluumaad kasta oo ku saabsan imtixaanka waxaa laga heli karaa lambarrada taleefannada ee hoosta ku yaal, websaydhka Wasaaradda (http://www.enerji.gov.tr) ama Agaasimaha Guud ee Maareynta Adeegyada Maareynta ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. Maya: 2 Bahçelievler- Çankaya / ANKARA).
Waa la xayeysiiyaa.
ICCI 2014 waxaa furay Taner Yıldız, Wasiirka Tamarta iyo Khayraadka Dabiiciga ah
Qorista Kaaliyaha Khaaska ah ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga